Iqoqo lasehlobo leLaura Mercier - kulabo abangenakukwazi ukugibela ekushiseni kwezinsuku ezishisayo. Embuseni welanga J'adore le Soleil uqoqe zonke izinto ezintsha ezidingekayo ukwakha ukwakheka okumangalisayo. Isikhumba se-bronze, izindebe ezikhazimulayo, amehlo ahlabayo ayingqikithi yokushisa emakhakheni aseMelika, okuyinto yonke i-fashionista eyokuthanda ngaphandle kokuhlukile.
Imikhiqizo emisha ye-J'adore le Soleil kwiwebhusayithi yomkhiqizo
Imikhiqizo yenkanyezi yochungechunge - izinti ezimbili zobuso ezinamabala aluhlaza okwesibhakabhaka nesibhakabhaka esincane kunazozonke. I-Bronzer Sunset I-Bronzing Crayon ivuliwe kahle esikhumbeni, ikunikeze i-satin exhaustish kanye nomphumela wegolide we-tan. I-Sunrise Highlighter Crayon iklanyelwe ukuzulazula kalula - kulula ukwenza ama-cheekbones, ngemuva kwempumlo kanye nomgodi phezu kwendlebe engenhla, ukudala izitshalo ezifanele. Womabili amavesi ahlangene kahle: angaxubaniswa futhi agqokwe, ahlukanise u-hue no-saturation wengubo.
I-duet kaLaura Mercier bronzers - ngokukhanyisa isikhumba segolide
I-compact bronzer i-Soleil Matte I-Creme Veil nge-matte ekupheleni-okuthola abanikazi bekhanda lamafutha. Yakha iveli elikhanyayo elimelana nelinye lemvelo lesikhumba futhi liqede ukubukeka okungenakulimala. Umphumela wesikhumba esicwebezelayo esicacile esibukeka singokwemvelo. I-Powder-bronzer I-Soleil Matte Veil I-Powder ilungisa ngokuqinile ukumboza, okwenza ibe ngaphezulu futhi engabonakali.
Izimali zemali uJadad le Soleil uzonikeza ukulungiswa okulungile
Ukuthinta okuqedile yizindebe ezilingayo, ezigcwele ukukhanya okucebile kweLacquer Up Acrylick Lip Varnish. Umkhiqizo uwu-lacquer we-lipstick nge-bright gloss finish, engangangeki ukuqina futhi engagcini imibala yezindebe. I-Lip Varnish varnishes iboniswa ama-nuances amahlanu amnandi: ithusi, i-coral, i-peach, okusajingijolo, i-salmon nomlotha-omnyama.
Mirror ukukhanya: lacquer acrylic Lip Varnish
Ukhilimu isikhumba senkinga
Imithetho yokusebenzisa izimonyo
Ungathola kanjani isikhathi samahhala ngenkathi uhlezi nengane?
Ukupheka ngokupheka izifundo zesibili
Uthandekayo uMaryus Weisberg usemnyakeni wesine wokukhulelwa
Ubuhle obuphikelela: senza i-manicure gel-varnish
Amasks for isikhumba ebusweni emva kweminyaka 40
Isaladi ngama-mushroom aqoshiwe
Ingane yayinezinyo zokuqala
Ukudla okubeletha nokubulala isifiso
Isaladi kusuka eel kanye crawfish
Izilonda ngolimi: izimbangela nezindlela zokwelashwa
Ukuqagela ku-runes ebuhlotsheni. Ukuqagela nge-runes: incazelo yama-runes
Imidanso yase-Ireland - amasiko nenkululeko